Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Uzbekistan » Uzbekistan Airways: Uzbekistan' ike ọdụ ụgbọ elu Uzbekistan eweghachiri nke ọma
Ndị ụgbọ elu Uzbekistan Airways wepụtara nkwupụta taa, na-ekwupụta na eweghachila ọkụ na ọdụ ụgbọ elu Namangan, Qarshi, Termez, Bukhara na Fergana n'isi ụtụtụ Wednesde.
N'ụtụtụ Tuzdee, a kọwapụtara nnukwu mkpọ ọkụ na ndịda Kazakhstan, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Kyrgyzstan na ọwụwa anyanwụ Uzbekistan, na-akpata nkwụsị ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu, na-emetụta ụgbọ okporo ígwè na akụrụngwa n'ọtụtụ obodo, gụnyere Bishkek, Tashkent na Almaty.
Dị ka Uzbekistan Airways si kwuo, eweghachiri ike zuru ezu na ọdụ ụgbọ elu Uzbekistan niile taa.
Ndị na-ahụ maka ọkụ na Uzbekistan na Kyrgyzstan kwuru na oke mkpọnyụ ọkụ ahụ kpatara ihe mberede mere n'igwe ọkụ Kazakhstan.
Onye na-ahụ maka ọkụ eletrik nke Kazakh bụ KEGOK, n'aka nke ya, kọwara na eriri ọkụ gafere n'ihi enweghị ahaghị nhata netwọkụ na Kyrgyzstan na Uzbekistan.